Otu esi eme ka ngwa ngwa metabolism: Lelee Atụmatụ Ltụ Efu Dị !tụnanya!
Blackberry tea: Chọpụta uru mmanya a ga - ewetara gị.
sliming	 25 December 2018
Etu esi agba oso metabolism: Ihe a ga-eri? Hụ ndụmọdụ dị ịtụnanya ịhapụ ife ọsọ ọsọ!
Metabolism bụ aha enyere ọrụ nke ịgbanwere nri gaa n’ike site na ahụ mmadụ. Ọ na - eme na mkpụrụ ndụ ọ bụla ma ọ dị mkpa iji mepụta ndụ, iji mee ka obi gị kụọ aka, akụkụ ahụ gị na - arụ ọrụ, ọbara gị na - agagharị, yana ụbụrụ gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ịmara otu esi eme ngwa ngwa na metabolism bụ ihe dị mkpa ọ bụghị naanị maka ebumnuche ịchọ mma, ma ọ bụ ebumnuche nke ifelata, kamakwa iji melite ogo ndụ, na-agbasikwu ike, na-eme ihe nkiri, na-enwekwu obi ụtọ.
N'isiokwu ndị na-esonụ, ị ga-enwe ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa banyere otu esi eme ka ngwa ngwa metabolism gị ngwa ngwa. Hụ onye ọ bụla n'ime ha ma mee ka ahụ gị rụọ ọrụ karịa ka ọ dị!
Kedu otu esi eme ka ngwa ngwa metabolism ka ị ghara ibu ibu?
N’ezie, ọ bụrụ na ị na-achọ ibi ndụ ka mma, ị nụla banyere omume ụfọdụ a na-akpọ cardio. Omume ndị a nwere aha a, kpọm kwem, n'ihi na ha na-eme ka ọsọ ọsọ ọbara na-agagharị, na-akpata site na mmepe nke metabolism.
Otu ụzọ ị ga-esi belata ibu ma mee ka metabolism gị dị ngwa n'otu oge bụ ịme ụdị mmega a, nke bụ ihe aerobics dị ike, nke a na-arụkarị na ọzụzụ ọrụ Ugwu.
Zọ ọzọ iji mee ka metabolism gị dị ngwa iji belata ibu bụ ịgbanwe nri gị. Wepu carbohydrates nke nta nke nta, malite iri ihe ndị ọzọ ndi na-edozi, iji ginger, ike, ọchịchịrị chocolate, broccoli, ọka niile na mkpụrụ pụrụ iche: tinye ose talugwu na nri nri nnu gị, ọ bụ ezigbo enyemaka iji mee ka ije ije metabolic dị ngwa.
Gịnị ma ọ bụrụ na metabolism dị nwayọ?
Kemgbe ọtụtụ afọ na àgwà adịghị mma, metabolism nke ndị mmadụ na-akwụsịlata. Nke a dị mma, mana enwere ike izere ya ma ọ bụ belata. Naanị gbanwee ndụ gị.
Ibi ndụ ahụike dị mma abụghị naanị maka ahụike ahụike, kamakwa maka ịkọwa mma, ọnwụ ọnwụ, ogo ndụ, mmegharị, na nkenke, usoro omume dị mkpa maka ibi ndụ nke ọma kemgbe ọtụtụ afọ.
Ya mere, iji mee ka ngwa ngwa metabolism gị ma nwekwuo ọchịchọ na mkpali ibi ndụ, ịkwesịrị na-eri nri nke ọma, n'ụzọ ziri ezi ma dị mma, na-a manyụ ọtụtụ lita mmiri kwa ụbọchị, na-ehi ụra maka elekere asatọ ma ọ bụ karịa, na-emega ahụ, na-ezumike ọrụ ma ọ bụ na-amụ ihe, zuru ike, gụọ, nwee oge maka onwe gị, soro ndị enyi pụọ, nwee obi ụtọ na ezinụlọ, ka o sina dị, ihe a nile ga - enyere gị aka ịgbanye ngwa ngwa n’arụ ọrụ.
Esi mee ka ngwa ngwa nke metabolism nkemgbe 35?
Dịka anyị kwuworo, mgbe afọ ụfọdụ gachara, metabolism na-akwụsịlata ma ndụ ndị mmadụ na-eduga na-enyere nke a aka. Na mgbakwunye n'ịchọ ịkpa ezi agwa, rie nri ga - enyere gị aka ime ngwa ngwa, mee ihe omume nke gị iji kpalite mkpụrụ ndụ iji kesaa ọbara, tinye ego na njirimara na ọnọdụ ndị ga - eme ka ndụ gị dịkwuo ndụ.
O ginger bụ ezigbo enyi iji mee ka metabolism dị ngwa. O nwere akụrụngwa na-enyere ahụ aka iji kpoo ọkụ ma rụọ ọrụ nke mitochondria.
Ihe dị mma gbasara ginger bụ na enwere ike iri ya n'ọnọdụ dị iche iche yana n'ụzọ dị iche iche: na ihe ọ juiceụ, ụ, tii, salads, ofe, anụ, na nkenke, site na ụtọ ruo ụtọ, n'ebe dị iche iche. Ndụmọdụ bụ ịhọrọ ginger nke na -adị ọhụrụ mgbe niile, na ọnọdụ okpomọkụ, mana ọ bụrụ na ị ga -eme tii, dịka ọmụmaatụ, a na -anabatakwa ya.
Kedu nri kacha mma iji mee ka metabolism ngwa ngwa?
E wezụga ginger nke dị mma maka ịgbanye ngwa ngwa metabolism, nri ndị ọzọ dịkwa mma. Ose Cayenne bụ ose nke enwere ike iji nri gị na nke na-enyere aka na usoro a, chocolate gbara ọchịchịrị, nke nwere obere shuga ma bụrụ nnukwu ihe na-akpali akpali, broccoli, ọka niile, poteto ụtọ, Tea tiima ọ bụ mmanya, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị iche iche, ha niile na-enyere gị aka ịmalite ngwa ngwa metabolism.
Kedu ka esi eme ka metabolism ruo kacha?
Enweghị ụzọ ị ga - esi mee ka metabolism gị dị ogologo. Ọ nwere oke ma nke a ga-eji nlezianya mee. Na mgbakwunye na omume ahụike, ihe oriri na-edozi ahụ bara ụba nke na-enyere usoro a aka, ị ga-eme mmemme cardio na ị nwere ike ịnwe mgbakwunye nke nwere ike a iji mee ka metabolism ngwa ngwa na oge ma ọ bụ nkeji tupu ịga nnukwu ọrụ ike gị.
na-enye nwa ara
Ara bụ a n'ezie jụụ ụzọ na adị gị metabolism na kwa ifelata. Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-achịkwa idafu kilogram niile ha nwetara n'oge afọ ime naanị site na inye nwa ara, na-enweghị ọbụna ịga mgbatị ahụ.
Nke a bụ n'ihi na omume a na-arụ ọrụ n'ahụ nwanyị dum, site na metabolism. Na ara, nne na-etinye ike dị ukwuu na, maka nke ahụ, ọ dị mkpa ka gbaa abụba na carbohydrates ọkụ. N'ihi ya, ọ ga-atụfu pound ma mee ngwa ngwa metabolism, mgbe ị na-enye nwa ahụ nri.
Inibium Caps nwere ihe na-egbochi agụụ ike kachasị ike n'ahịa, yana usoro dị elu nwere ike iwepu abụba. Na mgbakwunye, e mepụtara ya iji wepu oke ibu na oke ibu n'ụzọ nkịtị, na-enwe capsules dị ịtụnanya nwere ike ịchịkwa agụụ, ọgaranya na nri na vitamin.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị tufuo ụfọdụ nha ma mee udo site n’itule n’otu oge, Caps Inibium bụ ezigbo onye enyemaka. Site na usoro nke 100% eke na enweghị ihe egwu na ahụ, ọ na-enyekwu ume maka ndụ ụbọchị na ọkụ nke abụba ahụ.
Site na isoro ntuziaka maka iji Inibum Caps, ị ga-achọpụta uru dị egwu. Lelee:
Na-agba ọsọ metabolism
na-achịkwa ọrịa shuga
Chịkwa ọbara mgbali elu
Kpochapu abụba site na nsị
Na-ebelata nri pasta
na-egbochi ịka nká
Na-alụ ọgụ cellulite na sagging
Mma ma na-edozi eriri afọ
Enweghị mmegide ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ
Ndi Inibium Caps na-arụ ọrụ n'ezie? Kwesịrị ya?
Ee, okpu Inibium dị irè ma ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụ usoro dị elu nke mepụtara iji kpochapụ oke ibu na oke ibu, ọ na-enwe ike meziwanye metabolism ma belata agụụ n'ụzọ nkịtị. Na mgbakwunye, e mepụtara ya ka ị nwee ahụ ị na-atụ anya mgbe niile na nke ahụ, belata ibu ngwa ngwa na n'ụzọ dị mma.
Belata agụụ gị wee pịa bọtịnụ dị n'okpuru wee zụta okpu Inibium gị ugbu a!
Ọ bụrụ na ederede a masịrị gị iji mee ka ngwa ngwa metabolism gị, kesaa ya na netwọkụ mmekọrịta gị!
Usoro ọgwụgwọ Cellulite: Creams, mkpụrụ ọgwụ, ntụziaka ụlọ!
Nnukwu nri cholesterol: Mara ihe ị ga-eri ma nweta RID nke nsogbu a!
Kedu ihe bụ Crossfit?